शेयरबजारमा सबैभन्दा धेरै शेयरमूल्य भएका ६ कम्पनी, कुनले कति दिन्छन् लाभांश - नेपालबहस
शेयरबजारमा सबैभन्दा धेरै शेयरमूल्य भएका ६ कम्पनी, कुनले कति दिन्छन् लाभांश
| १६:३७:१० मा प्रकाशित
२१ जेठ, काठमाडौं । शेयरबजारले उकालो यात्रा तय गर्दा यी ६ कम्पनीको शेयरमूल्य भने उच्च छ । उच्च मूल्य हुने कम्पनीको शिर्ष स्थानमा राष्टिय बीमा कम्पनी रहेको छ । हाल शेयरबजारमा सूचिकृत कम्पनीमध्ये सबैभन्दा उच्च शेयरमूल्य भएको कम्पनी राष्टिय बीमा कम्पनी हो ।
राष्टिय बीमा कम्पनी
शेयरबजारको दोस्रो बजारमा सबैभन्दा धेरै शेयरमूल्य भएको कम्पनी राष्टिय बीमा कम्पनी रहेको छ । यसदिनसम्म कम्पनीको प्रतिकित्ता शेयरमूल्य २३ हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीको शेयरमूल्य २४ हजार ३ सय सम्मको पुगेको थियो । कम्पनीले २०७२/७३ मा शेयरधनीलाई ११४. २७ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो ।
युनिलिभर नेपालको शेयरमूल्य अहिले १९ हजार ८२६ रुपैयाँ छ । जबकी सबैभन्दा उच्च मूल्य हुँदा यो कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता ३६ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १०० प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको थियो ।
साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशन
उच्च शेयरमूल्य हुनेको तेस्रो स्थानमा उच्च मूल्य रहेको साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशन रहेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य ११ हजार १०० रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको थियो । जसमा २० प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ ।
बोटलर्स नेपाल तराई
चौथो नम्बरमा बोटलर्स नेपाल तराईको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता १० हजार ४९६ रुपैयाँ छ । यो कम्पनीको शेयरमूल्य पनि हालसम्मको उच्च हो । कम्पनीले कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई ५५ नगद लाभांश घोषणा गरेको हो । हालसम्म कम्पनीले सधै नगद लाभांश दिदै आइरहेको छ ।
उच्च शेयरमूल्य हुनेमध्येको पाँचौ नम्बरमा महिला लघुवित्त रहेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता ४७ सय ५२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
उच्च शेयरमूल्य हुनेमध्येको छैटौं नम्बरमा हिमालयन डिष्टिलरी रहेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता ४५ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई ५० प्रतिशत नगद र ५० प्रतिशत बोनस शेयर गरी १०० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हो । पछिल्लो वर्षहरुमा कम्पनीले बोन शेयर र नगद लाभांश दिदै आइरहेको छ ।
धिताेपत्र बोर्डको ‘एक्सन’ पछि बजारमा आएको पहिरो रोकिएन ४८ मिनेट पहिले
रिलायबल नेपाल लाइफको आईपीओ रेटिङ सम्पन्न ८ मिनेट पहिले
यी हुन् माओवादी केन्द्रबाट निश्काशित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु १५ मिनेट पहिले
आज बजारमा कतिमा भइरहेको छ सुनको कारोबार ? २४ मिनेट पहिले
राइफल पड्किएर ड्युटीमै रहेका सेनाका जवान घाइते ३२ मिनेट पहिले
रक्तचापको श्रेणी कसरी थाहा पाउने ? ३७ मिनेट पहिले
तुलसीपुर बजारमा छाडा छोडिएका चौपाय ४५ मिनेट पहिले
ईन्सुलीन लिदै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहाेस यी कुराहरू ४६ मिनेट पहिले
पहिरो पन्छाएर मर्मतका लागि श्रमदान गर्दै ४८ मिनेट पहिले
निर्माणाधीन आधुनिक बागलुङ बसपार्क ५४ मिनेट पहिले
पक्की पुल नभएपछि अस्थायी पुलबाट आवतजावत ५७ मिनेट पहिले
आकस्मिक र अकल्पनीय बाढीले न रह्यो बास, न बच्यो गाँस ! २० घण्टा पहिले
काश्मिरका रेल स्टेशनहरुमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा १३ घण्टा पहिले
आजदेखि गाउँपालिकामा भिडियो एक्स–रे सेवा शुरु २ दिन पहिले
स्टोरिज अफ नेपालद्धारा एकल महिलालाई सहयोग ५ दिन पहिले
डाइभर्सनले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यातायात सञ्चालन गर्न सास्ती ५ दिन पहिले
किन मुटु ढुकढुक हुन्छ ? थाहा पाउनुस् २ हप्ता पहिले
सेती अस्पतालमा कालो ढुसी संक्रमितको मृत्यु ३ हप्ता पहिले
एकैचोटि १० हजारको एन्टिजिन र पीसीआर परीक्षण ३ दिन पहिले
मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध रिट दर्ता २ हप्ता पहिले
संविधान निर्माण सँगै उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबै नेपालीको धर्म हो : पूर्वराष्ट्रपति डा यादव २ वर्ष पहिले
अस्पतालमा मृत्यु भएका तीन मध्ये एकमा कोराना ९ महिना पहिले
कोरोना त्रासले रिपब्लीकन पार्टीको चुनावी सभा स्थगित ११ महिना पहिले